Madaxweynaha Maamulka Pundland Ayaa Gaaray Magaalada Kismaayo(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi uu hogaaminayo, ayaa maanta gaaray Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) & Masuuliyiin kale, ayaa wefdiga Madaxweynaha Puntland si diiran ugu soo dhaweeyay Garoonka Kismaayo.
Wefdiga Madaxweynaha, ayaa loo kaxeeyay Madaxtooyada Magaalada Kismaayo, halkaasoo caawa lagu wado inay ku hoydaan, waxayna berrito ka qaybgeli doonaan caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlaayay soo dhawaynta Madaxweynaha Puntland iyo wefdigiisa, ayuu sheegay wefdiga Puntland ka socda inay u yimaaden ka qaybgalka caleemo saarkiisa.
“Madaxweynaha Puntland, Golahiisa Wasiirada, Isimida iyo dhammaan wefdiga reer Puntland ee yimid Magaalada Kismaayo si ay uga qaybgalaan caleema saarka, aad baan u soo dhaweynayaa, aad baan ugu faraxsanahay inay noqdaan wefdigii ugu horeeyay ee yimaada.” Ayuu yiri Madaxweyne Madoobe.
Madaxweyne Gaas oo dhankiisa ka hadlaayay booqashadiisan Magaalada Kismaayo, ayuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay, isagoona xusay in uu kaga qaybgeli doono caleemo saarka Axmed Madoobe.
“Aad baan ugu faraxsanahay Magaalada Kismaayo, waxaan u nimid ka qaybgalka xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland, anaga oo salaan iyo farxad ka wadna shacbiga iyo xubnaha kale ee Puntland, waxaan u nimid inaan farxadda la qaybsano walaalaheena Jubbaland.” Ayuu yiri C/weli Gaas.
Masuuliyiin Dowladda Somaliya ka socda, ayaa waxaa la fillayaa saacadaha soo socda inay gaaraan Magaalada Kismaayo, si caleemo saarka kaga qaybgalaan.
Maamulka Ahlu suna Oo Beeniyey In Ay Kabaxeen Magaalada Dhuusamareeb Ee Xarunta Galgaduud